विभेदकारी नागरिकता विधेयक मधेशी जनतालाई मान्य हुनै सक्दैन | Daily Express
विभेदकारी नागरिकता विधेयक मधेशी जनतालाई मान्य हुनै सक्दैन
२०७७ असार १०, बुधबार २३:१४
कोभिड१९ को महामारीमा बन्दाबंदीको अवस्थामा नेकपा नेतृत्वको सरकारको मानसिक विचलन स्पष्ट रुपमादेख्न सकिन्छ । अनेक बखेडाहरु झिक्दै मधेशी समुदायलाई जिस्काउने कार्यहरु गर्ने अधिकार कसले दियो यो सरकारलाई ? नेकपाको अंगिकृत नागरिकता सम्बन्धि विवाद ल्याएर संविधानको मर्म माथि कुठाराघात हुँदैछ । नागरिकता विधेयकलाई विना कारण विवादमा पारिएको हो । यो युगौं देखि चलिआएको बेटीरोटीको सम्बन्धमाथि किन प्रहार गर्दैछ नेकपाले ।
तराई मधेश नेपालको महत्वपुर्ण भूभाग हो । तराई अन्नको भण्डार भनेर चिनिने भूभाग हुँदाहुँदै पनि उक्त भूभागमा बस्ने समुदायसंग केही तथाकथित पहाडिया प्रवृतीबाट मानसिक रुपले ग्रसित भई बेलाबेलामा झमेला किन निकालिन्छ ? सबैलाई मान्य हुने गरी जारी संविधानलाई मधेशको विपरीत किन फेरी संसोधन गर्ने दुस्साहस गर्दैछ अधिनायकवादी पार्टी नेकपा । कानुनहरु जहिले पनि गरिब, निमुखा, विपन्न, कमजोर तथा मधेशी समुदायको हित विपरीत बन्दछ, यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? संविधान बन्यो तर देशमा जनता धेरै अवसरहरुबाट वन्चितहुने गरी बेला बेला संशोधन गरेर विवाद सिर्जना हुने गर्दछ । तराई मधेशमा बसोबास गर्ने समुदायलाई कहिले भाषा, त कहिले भेषभुषा, त कहिले सिमाना, त अहिले आएर नागरिकता सम्बन्धि विधेयकद्वारा अपहेलित गर्ने प्रयास गर्दैछ यो सामन्ती सरकारले ।
नागरिकता सम्बन्धि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३लाई मानि आएको र समाजमा सहज सरल वातावरण भैरहेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा कुनै पनि त्रुटी नभएको अवस्थामा किन फेरी संसोधनको नौटंकी गर्ने कोशिस गरिदै छ ? नेकपा र नेकपाको बहुमतको दम्भ र अहंकारी सरकार यो कदम घोर निन्दनीय छ ।
यसले सामाजिक,संस्कृतिक, राजनितीक र साम्प्रदायिकद्वन्द सृजनाको विजारोपण गर्दै छ ।
अब यो नागरिकता सम्बन्धि मुद्दामा मधेशी मुलुका महिलाहरु पनि सशाक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछिन् । म पनि मधेश्की छोरी बुहारी हुँ तर राष्ट्रियतालाई सम्मान गर्दछु । यो नागरिकता सम्बन्धि विधेयक अव्यवहारीक, अलोकतान्त्रिक निर्णयले सबै मधेशी महिलाहरुको आत्मसम्मानमा ठुलो आघात भएको छ, यो कदापि मान्य हुँदैन ।
सत्तारुढ दल नेकपाले विदेशीमहिलाले नेपाली पुरुषसंग विवाह गरेको ७ वर्षपछी मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने निर्णयले भावी सन्ततीमाथि पर्ने नाकारात्मक प्रभावहरु, विवाह भएको एक बर्षमा बच्चा जन्मिन्छ, बच्चाको जन्मदर्ता कसरि गर्ने ? विदेशमा बस्ने श्रीमानसंग विदेश जान राहदानी कुन आधारमा बनाउने ? श्रीमानको मृत्यु भएको अवस्थामा के गर्ने ? श्रीमानको सम्पत्तिको अंशमा हकदावीको आधार के हुन्छ ?
महिलाले सरकारी निकायमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने आधार के हो ? यस्ता अनेक समस्याको भुमरीमा किन फसाउने दुस्साहस गरिदै छ ।
नेपालको संविधान २०७२ , नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ र पंचायतकाल देखि नै हालसम्म विदेशी महिलाले विवाह गरे लगत्तै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेको छ । खासगरी नागरिकता सम्बन्धि विशेष वखेडा पनि नेपाल भारत संग जोडिएर निकालिएको देखिन्छ । नेपाल भारत सम्बन्ध कुनै पनि सरकारले बनाएको होइन । इतिहास, परम्परा, संस्कृति, धर्म, भाषा, आर्थिक सामाजिक, र राजनीतिक पाटाहरुले दुई देशबीचको सम्बन्ध पुष्टि अनि परिभाषित गरिएको छ ।
युगौं देखि रही आएको परम्परावादी सम्बन्धलाई कुनै पनि सरकारले विच्छेद गराउने दुस्साहस गर्न सक्दैन । नेपाल भारत सम्बन्धका दुई प्रमुख आधारहरु खुलासिमा र वैवाहिक सम्बन्ध नै हो । यी दुवै मुद्दा प्रति यो अधिनायक तथा सामन्तवादी कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको रबैया अत्यन्तै गलत देखिन्छ ।
नेपाल भारत जनमानसमा ’दुरी’को विजारोपण गर्ने दुस्साहस गरिदै छ ।
कोरोनकालमा नागरिकता सम्बन्धि अनावश्यक बखेडा झिकेर मुलुकको शान्ति व्यवस्था तथा सामाजिक परम्परालाई खलबलाउने दुस्प्रयास गरिदै छ । नेपाल भारत मित्रता धेरै पुरानो छ । यीदुई देशबीचको सम्बन्ध विचित्र छ । अरुसंग चाहेर पनि नजिक हुन सकिदैन। राजनीतिक तहमा मात्र नभई जनस्तरमा सम्बन्धयुगौं देखि नै स्थापित छ ।
अन्त्यमा, विचार गर्नैपर्ने, किन असफल हुँदै छ हाम्रो लोकतन्त्र ? कम्युनिस्ट शासनको शब्द मै लोकतन्त्र छैन । यो सरकारको शासन शैली पस्चगमनको यात्रामा तल्लिन देखिन्छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्र माथि नै खतराको घन्टी बज्दै छ । लोकतन्त्रले पुराना शक्ति र स्वार्थका संरचनाले लोकतान्त्रिक नेतृत्वकै आस्थाको पहाड तोड्दै भत्काउदै छ । संरचना फेरिएन बरु राजनीति नै पो फेरिएको अनुभूति जनतालाई हुन थाल्यो । विभेद पुरानै, सम्बन्ध पुरानै, शासकीय प्रणाली पुरानै छ । विधिको शासन कुनै पनि तन्त्रमा लागु हुन सकेन । शासकीय अहंकार र सर्वसत्तावाद सोचलाई फेर्न सकिएन । सरकारी निर्णय जहिले पनि विवादित हुने गर्दछ । त्यसैको गलत अभ्यास हो नागरिकता विधेयकको संसोधन । तराई मधेशमा अब फेरी आगो बाल्न बाध्य गर्यो सामन्तवादी सरकारले । परम्परावादी सांस्कृतिक, धार्मिक र भावनात्मक सम्बन्धलाई गहिरो ठेस पुर्याउने कार्य गरेको छ यो सरकारले तर यो निर्णयलाई कदापि सहने छैनन् तराई मधेशको जनता । यो निर्णय घोर निन्दनीय हो ।